Anyị amaralarị ụbọchị mwepụta na ọnụahịa nke Doogee S98 ọhụrụ | Ngwa akụkọ
Ụlọ Ignatius | 18/03/2022 13:16 | Mobiles
Na Machị 28, Doogee S98 ga-akụ n'ahịa, nke Ekwentị siri ike ọhụrụ sitere n'aka onye nrụpụta Doogee, nke a maara dị ka fone ekwentị, ma ọ ga-eme ya na ọnụahịa mmeghe pụrụ iche nke $239, ọnụ ahịa mmeghe nke ga-adị naanị n'etiti Machị 28 na Eprel 1.
Ọnụahịa mgbe niile nke ngwaọrụ a bụ $339, yabụ onyinye mmeghe na-enye anyị ohere ịzọpụta 100 dollar. Na mgbakwunye, anyị nwere ike isonye na eserese maka 4 Doogee S98 site na webụsaịtị ya. Site na Machị 28 ruo Eprel 1, anyị nwere ike zụta Doogee S98 maka 239 dollar en AliExpress y doogeemall.
1 Kedu ihe Doogee S98 na-enye anyị
1.3 Ndị kamera
1.4 Batrị ruo ụbọchị 3
2 Ebe ị ga-azụta Doogee S98
Nhazi MediaTek Helio G96
Oghere nchekwa 256 GB USF 2.2 ma gbasaa ya na microSD
Ihuenyo 6.3 inch - FullHD + mkpebi - LCD
ndị ọzọ NFC – gam akporo 12 – 3 nke mmelite
Doogee S98, onye nrụpụta na-elekọta ya Helio G96 sitere na MediaTek. Tinyere ihe nhazi ahụ, anyị na-achọta 8 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa, nchekwa nke anyị nwere ike ịgbasa site na iji kaadị microSD.
Doogee gụnyere ihuenyo 2. Nke mbụ na isi nwere nha nke 6 sentimita. Ihuenyo nke abụọ, anyị na-ahụ ya na azụ ma nwee nha 1,1 inch.
Site na ihuenyo azụ a, anyị nwere ike ịhụ oge, jikwaa ịkpọghachi egwu, zaa oku, lelee ọkwa batrị, hụ ozi anyị nwetara…
N'ịbụ igwefoto otu n'ime akụkụ nke ndị ọrụ na-eburu n'uche nke ukwuu, ụmụ okorobịa na Doogee elelewo ya anya pụrụ iche. Na azụ nke ngwaọrụ, anyị na-ahụ 3 lenses:
64 MP isi ihe mmetụta
8 MP obosara akụkụ na
20MP ihe mmetụta ọhụụ abalị nke Sony mere.
Igwefoto n'ihu bụ Samsung mere ma nwee a Mkpebi 16 MP.
Batrị ruo ụbọchị 3
Na a 6.000 mAh batrị, Doogee S98 nwere nnwere onwe nke ụbọchị 2 ruo 3 na iji ngwaọrụ ahụ na-agafeghị oke.
Ọ dakọtara na chaja ngwa ngwa ruo 33W, na chaja gụnyere nke otu ike. Ọ dakọtara na chaja ikuku.
Ebe ị ga-azụta Doogee S98
Doogee S98 ọhụrụ a ga-adị na Aliexpress na Doogeemall nwere njikọ dị na mmalite isiokwu. Mgbe nkwalite mmalite ahụ kwụsịrị, ọnụahịa ahụ ga-abụ $339. Ọ bụrụ na akụ na ụba gị anabataghị ya, ị nwekwara ike nweta otu n'ime 4 Doogee S98 nke onye nrụpụta na-enweta site na webụsaịtị ya na njikọ ndị egosipụtara n'elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Anyị amaraworị ụbọchị mmalite na ọnụahịa nke Doogee S98 ọhụrụ
Otu esi ewepu nje na Mac gị